आम्मा हो ! सुन तोलाकाे ७० हजार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको भाउ ताेलाकै ७० हजार पुगेको छ । विहिबार सुन तोलामा ७० हजार रुपियाँ पुगेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार एक हप्तादेखि लगातार बढेको सुनको भाउमा विहिबार पाँच सय रुपियाँ थपियो । अघिल्लो दिन वुधबार ६७ हजार पाँच सयमा कारोबार भयो ।
वुधबार तोलामा १५ सय रुपैयाँ बढेको थियो। साउन ३ गतेदेखि उकालो लागेको सुनको भाउ साउन १६ गतेसम्म घट्ने र बढ्ने क्रम जारी रह्यो। साउन १७ गतेदेखि सुनको मूल्य निरन्तर बढीरहेको छ। १७ साउनमा ८ सय रुपैयाँले बढेर सुन तोलाको ६५ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भयो ।
यस्तै, साउन १९ गते फेरि तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेर ६६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। एकै दिन १५ सय रुपैयाँले बढेर साउन २० गते सुन तोलाको ६७ हजार ८ सय कायम भयो। यस्तै २१ गते मंगलबार फेरि सुन तोलामा २ सय रुपैयाँले बढेर ६८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। वुधबार १५ सय बढेको सुन, विहिबार पाँच सय बढ्दै ७० हजार पुगेको हो ।
यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ। चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँले बढेर ८२५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यका अनुसार अमेरिका–चीन व्यापार युद्धका कारण सेयर र डलरका लगानीकर्ता सुनतर्फ आकर्षित हुँदा सुनको भाउ बढेको हो । सुनको भाउ लगातार बढ्न थालेपछि नेपाली बजारमा सुन कारोबार ठप्प जस्तै भएको र सुन खरिद गर्ने भन्दा पुराना गहना बिक्री गर्ने ग्राहकको भीड बढेको उनको भनाई छ ।
<<< : साफ यू–१८ : नेपालको पहिलो भिडन्त पाकिस्तानसँग
नौ महिनापछि खलंगामा बिजुली : >>>
सुन्तलाबाट २५ लाख
कोरियाको तुलनामा बढी आम्दानी नेपालमा
चार हिमालका लागि पर्वतारोहीले लिए अनुमति
लगातार उकालो लाग्यो नेप्से